Kaonty fanofanana manokana: ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao
Posted by Tranquillus | Aogositra 30, 2020 | Mipetraka sy miasa any Frantsa
Ny mpiasa rehetra sy ny mitady asa mihoatra ny 16 taona dia afaka mahazo tombony amin'ny kaonty fanofanana manokana hatramin'ny fiandohan'ny fiainany miasa ka hatramin'ny fisotroan-dronono. Ireo zony ireo dia azo ampiasaina mandritra ny androm-piainana matihanina. Araka izany, mba hahafahana manaraka ny lalam-piofanana voamarina, ny mpikaroka asa dia afaka manetsika ny CPF-ny. Fantaro izay rehetra tokony ho fantatrao momba ity fitaovana ity hahazoana antoka ny lalan'ny asa.
Inona ny kaonty fanofanana manokana ary inona no ampiasaina?
Ny CPF na ny marimarina kokoa momba ny kaonty fanofanana manokana dia fomba iray ahafahanao mampivelatra sy manampahaizana manokana ny fahaizanao. Raha atao teny hafa, ny kaonty fanofanana manokana dia mamela ny olona mavitrika rehetra hanana zon'ny fiofanana.
Ny fanavaozana ny fiofanana momba ny asa tato ho ato dia mikendry ny hiantoka ny lalan'ny asa mba hisorohana sy hiadiana amin'ny tsy fananan'asa. Izy io dia misy fanovana isan-karazany, ao anatin'izany ny kaonty fanofanana manokana. Manomboka amin'ny taona 2019, ny kaonty fanofanana ho an'ny tena manokana dia mahazo vola, aloa amin'ny euro (ary tsy ora intsony), noho ny:
500 euro isan-taona ho an'ny mpiasa tapa-potoana sy mpiasa maharitra, voafetra amin'ny 5 000 euro.
800 euro isan-taona ho an'ny mpiasa tsy dia mahay, voafetra amin'ny 8 euro.
CPF: ny fampiharana fampiharana izay manamora ny fidirana amin'ny fiofanana
Ny fisehoana voalohany mandritra ny tapany faharoa amin'ny 2019, ny rindranasa finday dia ahafahanao mividy ny lalam-piofananao maimaimpoana ary tsy misy idiran'ny antoko fahatelo. Ity serivisy ity dia tantanan'ny Caisse des Dépôts. Io dia ahafahanao mahafantatra ny zonao sy hitantana ny fisie anao amin'ny fizakantenanao tanteraka na dia misy aza ny fandraisana anjara mifanaraka amin'izany.
HAMAKY Torohevitra amin'ny fanokafana kaonty any Frantsa
Fantaro ny zonao;
Mitadiava lalam-piofanana mifandraika amin'ny indostriao;
Afaka misoratra anarana tsy misy mpanelanelana ary mandoa vola an-tserasera;
Mifandraisa amin'ny fampidirana ny tsenan'ny asa amin'ny faran'ny fiofanana;
Jereo sy manoratra hevitra isaky ny fotoam-pampiofanana.
Iza no manahy?
Ny mpiasa rehetra 16 taona no ho miakatra, na inona na inona satan'izy ireo (mpiasan'ny sehatra tsy miankina, mpitady asa, maso ivoho miankina na tsy miankina ary efa misotro ronono). Ny zon'ireto kaonty ireto dia azo ary azo ampiasaina mandritra ny androm-piainanao hampiofanana anao, na dia misy aza ny fiovana orinasa na fahaverezan'ny asa.
Inona no azonao atao amin'ny famatsiam-bola CPF anao?
Ny CPF anao dia afaka manampy anao mamatsy vola:
Ny fampiofanana arak'asao;
Fahazoan-dàlana hitondra fiara maivana;
Fanohanana amin'ny famoronana orinasa;
Fahazoan-dàlana na fanomezan-dàlana.
Fa maninona no tokony hampiofana sy ny fiofanana tokony ho fidinao?
Ny vanim-potoana fikarohana asa dia mety fotoana iray hisaintsainana ny asanao, ny fahaizanao, ny tanjanao. Ity dia fotoana iray ihany koa hanavaozana ny CV anao hisarika ny sain'ny mpikarama.
Ny fahaiza-miteny anglisy dia fahaiza-manao izay angatahan'ny orinasa matetika. Eny tokoa, ny fanatontoloana ny varotra dia misy fiantraikany amin'ny sehatra rehetra sy ny toerana rehetra, na inona na inona haavon'ny andraikitr'ireo toerana ireo. Ny fanatsarana ny fahaizanao anglisy dia mety ho tena manampy amin'ny fitadiavana asa.
Orinasa sy fikambanana 14 eran'izao tontolo izao no matoky ny fitsapana TOEIC. Nisafidy ireo fanadinana ireo izy ireo noho ny maha-azo itokisana azy ireo ary mampitaha ireo ambaratonga anglisy mba hanohanana ny fanapahan-kevitr'izy ireo amin'ny fandraisana andraikitra sy fampiroboroboana. Noho izany, azonao atao ny mamatsy ara-bola tanteraka ny fitsapana TOEIC amin'ny CPF anao.
Misy karazana CPF samihafa ve?
Eny ny valiny. Mandritra ny fiainanao miasa, dia hahafantaranao karazan-CPF 3 isan-karazany izay:
Ny CPF mizaka tena amin'ny hetsika ataon'ny olona voakasik'izany (hampiasaina ivelan'ny ora fiasana). Maimaimpoana ny fanentanana ary mamela ny olon-drehetra hisafidy ny fiofanana sahaza azy amin'ny katalaogy atolotra amin'ny tranokala. Miaraka amin'ny fampiharana finday, tsy mila fanamarinana mialoha ary tsy misy fomba fitantanana hafa ilaina.
Niara-nanangana ny CPF. Ity dia fomba iray ifampizaran'ny mpampiasa sy ny mpiasany (hampiasaina ivelan'ny ora fiasana na mandritra ny fotoana fiasana). Ny tanjona dia ny hiara-manangana, ny mpampiasa sy ny mpiasa, ny tetik'asa fanofanana manodidina ny tombotsoan'ny rehetra. Izany dia mitaky fifanarahana eo amin'ny roa tonta ary koa ny fanentanana ny kaontin'ny CPF an'ny mpiasa.
Ny CPF tetezamita izay mahasolo ny fialan-tsasatra ho an'ny tsirairay (CIF). Ity farany dia fialantsasatra fiofanana hiasa amin'ny fahaizany miaraka amin'ny tsy fahazoan-dàlana amin'ny asany.
Ireo mitady asa sy CPF: inona ny zonao?
Na voasoratra anarana amin'ny Pôle Emploi na tsia ianao dia manan-jo hanokatra kaonty CPF amin'ny tranokala moncompteformation.gouv.fr. Azonao atao ihany koa ny manao izany amin'ny alàlan'ny fampiharana finday, hita ao amin'nyApp Store et Google Play.
Ny fiofanana azo alaina dia ahafahanao mahazo mari-pahaizana / fanamarinana ary hahazo fahalalana sy fahaiza-manao marobe.
Tsy toy ny mpiasa, amin'ny maha-mpikaroka asa anao dia tsy afaka mahazo zona fanampiny ianao mandritra ny fotoana tsy fanananao asa. Na izany aza, tsy midika izany fa tsy afaka mampiasa ny zonao azonao ianao mandra-pahatongan'izany.
Ahoana no hamatsianao vola ny fampiofananao amin'ny volan'ny CPF?
Azonao atao ny manetsika ny zon'ny CPF anao ary manomboka miofana mandritra ny fotoana tsy fanananao asa. Misy azo atao roa:
Raha manarona ny fiofanana rehetra nataonao ny zonao dia voamarina ho azy ny tetikasanao. Tsy mila ny fifanarahana Pôle Emploi ianao hanombohana ny fiofanana.
Raha tsy manarona ny fiofanana rehetra ny zonao dia tsy maintsy manamarina ny drafitra fampiofanana anao i Pôle Emploi. Ny mpanolotsaina Pôle Emploi anao noho izany dia tompon'andraikitra amin'ny fametrahana "rakitra fanofanana" ary mitady vola fanampiny avy amin'i Pôle Emploi. Ho fanampin'izany, ny Filan-kevi-paritra na andrim-panjakana hafa dia afaka manampy anao amin'izany fomba izany.
Na inona na inona toe-javatra iainanao, amin'ny maha-mpikatsaka asa anao, dia tokony hifandray amin'i Pôle Emploi ianao raha manana fanontaniana momba ny CPF anao.
Kaonty fanofanana manokana: ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao September 26th, 2020Tranquillus
Teo alohaMianara mijery ny tsipika payslip anao andalana
manarakaMiala amin'ny fanombohana orinasa, modely taratasy fangatahana maimaim-poana
Ireo fombafomba mifandraika amin'ny fiara sy ny fahazoan-dalana mitondra any Frantsa
Ny karazany samy hafa amin'ny andiany, rahoviana ary ny fomba hanararaotra azy ireo?